Sooyaalka Geedi Socodka Wadahadalada Dowladda Federaalka iyo Somaliland – Goobjoog News
Sooyaalka Geedi Socodka Wadahadalada Dowladda Federaalka iyo Somaliland
Maamulka Somaliland waxa uu gooni isu taag ku dhawaaqay 18 May 1991, balse ma jiro hal dal oo adduunka ka tirsan oo aqoonsaday Somaliland, waxaa intaasi barbar socotey in dalka intiisa kale aysan ka jirin wax dowlad Soomaaliyeed ah oo wadahadal la gasho si tabashooyinkooda wax oga qabato.
Sidaasi oo ay tahay Somaliland markasta waxa ay diyaar u ahayd in ay miiska wadahadalada soo fariisato, waxayna mar uun sugeysey dowlad rasmi ah oo dalka ka dhalata.
Dhamaan isku dayadii ahaa in Somaliland ay ka laabato gooni isu taaga ay ku dhawaaqday, iyada oo loogu yeerey marar badan in ay kasoo qeybagalaan shirarkii dib u heshiisiinta ee Soomaaliya loo qabatay, baaqyadaasi oo markasta ay diidanayd Somaliland.
Markii ugu horeysey oo lasoo hadal qaadey shirkii caalamiga ah ee Soomaaliya loogu qabtay magaalada London 23-kii Feberaayo, 2012-kii. Mid ka mid ah qodobadii shirkaasi kasoo baxay ayaa waxa uu dhigayay in beesha caalamka ay aqoonsato, islamarkaasina taageerto muhiimada ay leedahay in wadahadalo ay dhexmaraan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Dhawr bilood kadib shirkaasi ayaa waxaa isla magaalada London ku qabsoomey shirkii ugu horeeyey oo fool ka fool isu soo horfariistaan, wuxuuna shirkaasi dhacay 20-kii bishii June, 2012-kii.
Ergada Shirka oga qeybgashay Somaliland
Wasiirka Arrimaha Debeda, Dr Maxamed Cabdilaahi Cumar
Wasiirka Hawlaha Guud iyo Gaadiidka, Axmed Cabdi Xaabsade
Wasiirka Cadaalada iyo Garsoorka,Xuseen Axmed Caydiid iyo
Wasiirka Beeraha, Prof. Faarax Cilmi Maxamuud
Ergada dowladda kmg ah ee Soomaaliya oga qeybgashay shirka
Cabdisamad Macalin Maxamud: Wasiirka Arimaha gudaha iyo amniga qaranka
Axmed Xasan Gaboobe: Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka.
Cabdullahi Xaji Xasan Maxamed: Wasiirka Arimaha dibadda
Cabdinasir Maxamud Cabdulle Garjeex: Wasiirka Maaliyadda.
Jaylani Nur Ikar: Wasiirka Howlaha guud iyo guriyeynta.
Dhanka Puntland, waxaa lagu soo daray Wasiirka arimaha gudaha: Jen: Cabdulahi Axmed Jama(Ilka Jiir) iyo Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ee Puntland Daud Maxamed Cumar, arintaas oo ay ka biyo diiday Somaliland.
Maamulka Somaliland ayaa sheegay in aanay wax wada hadal ah la gali doonin Soomaaliya, iyada oo qoonsatay xubnaha guddiga dowladda KMG ah ay u soo magacawday wada hadalka, oo ay sheegeen inay ku jiraan laba xubnood oo ka yimid maamul goboleedka Puntland.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland, Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Shariif inuu carqaladeynayo wada hadalka.
Cabashadaasi Somaliland kadib waxa ay dowladda Soomaaliya ku qasbanaatay in ay ergada ka saarto xubnaha ka socdey Puntland si wadahadalada u furmaan.
28-dii June, 2012: Shirkii kaasi xigey waxa uu dhacay taariikhda marka ay ahayd 28-dii June, 2012 kaasi oo markii ugu horeysey ay si rasmi ah u kulmeen madaxweynihii Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo, wuxuu shirkaasi ka dhacay magaalada Dubai ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta.
13 April 2013: Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Siilaanyo ayaa ku kulmay dalka Turkiga, iyadoo kulanka dhex maray uu goob joog ka ahaa Ra’iisul Wasaarihii Turkiga Recep Tayyib Erdogan oo dhowaan loo doortay Madaxweynaha Turkiga.
Kulankan waxaa uu ka dhacay wasaaradda arimaha dibadda ee Turkiga, Waxaa labada wafti u kala dab qaadayey Wasiirka arimaha dibadda Axmed Daud Oglu, oo haatan ah Ra’isul Wasaaraha dalka Turkiga.
Waxaa halkaas lagu kala saxiixday heshiis ka kooban todobo qodob oo ay ka mid ahaayeen: In la sii wado wada hadalka, in labada dhinac isla ogolaadeen heshiisyadii labadii kulan ee ka horeeyay dhacay, wada xaajoodkana uu halkooda kasii socdaan, in labada dhinac ka howla galaan in Somaliland kaalmo caalami ah hesho iyo taageero hesho, Xoojinta labada dhinac ee nabad galyada oo la wadaago xogta, tababarada iyo deeqaha, in 90 cisho gudahood la isku yimaado iyo in la fogaado hadalo waxyeeli kara wada hadalada.
Mudadii u dhaxeysey 7 illaa 9 July 2013: Labada dhinac ayaa markale ku kulmey dalka Turkiga, waxaana la saaray gudi farsamo oo wadahadalada fududeeyo, kuwaasi oo loo xilsaaray in ay kasoo shaqeeyaan sidii shir kale la’isugu iman lahaa muddo 4 bilood ah.
Ergadii Dowladda Somalia iyo Somaliland ee ku wada hadlayay Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa kala saxiixday is afgarad.
Inkastoo qodobada ugu muhimsan wada hadalka sida gooni isutaagga Somaliland iyo Midnimada Somalia aan weli laga wada hadlin ayaa waxaa heshiiskan ka muuqda xoogaa horu mar ah marka la bar bar dhigo heshiisyadii hore.
Qodobada ugu muhimsan heshiiska waxaa ka mid ah, in laga garaabo dhibaatadii dadka reer Somaliland ka soo gaartay xukumadii dhexe ee miltariga, lana cambaareeyo.
April 2, 2014: Wada hadalada u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaaliland oo ku saabsan maareynta hawada Dalka ayaa ka furmay magaalada Istanbul ee Dalka Turkiga, ayadoo ay wada hadaladani daba socdaan qodobo hore la isugu af gartay oo quseeyay sidii loo gaari lahaa heshiis laba geesood ah.
Wada hadaladani oo u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa kala horkacayay Wasiirada Kala ah Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Saciid Jaamac Qorsheel iyo Maxamud Cali Xaashi.
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Saciid Jaamac Qorsheel oo ka warbixiyay wadahaladani ayaa sheegay in inta badan arrimaha laga wada hadlayo ay ku salaysan yihiin arrimo farsamo oo la xiriira sidii maamulka hawada loogu so wareejin lahaa Dalka Soomaaliya iyo in si wada jir ah looga wada sheeqeeyo maareeynta hawada Soomaliya.
Waxaa shirkani lagu gaarey is afgarad ah in labada dhinac ay isla maareeyaan hawada Soomaaliya oo markaasi uu socdey qorshe ah in gacanta dowladda lagu wareejiyo maamulkeeda.
Nov 30, 2014: Wada hadal kale ayaa dhex maray Soomaaliya iyo Somaliland, kadib markii muddo hakad ay galeen wadahadalada, Wafdiga ka socda Maamulka Soomaaliland ayaa gaaray Magaalada Ankara,waxaana Hogaaminaya Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis .
December 20, 2014: Shir ay ka qeybgalayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Siilaanyo ayaa ku qabsoomey magaalada Jabuuti, waxaana lagu kala saxiixdey heshiis qeexaya in wadahadaladii hakadka galay mudada ay dib u furmaan.
Qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa
In Wada hadalka lagu soo daro ama laga qeyb galiyo Xeeldherayaal iyo dowlado saxiib ah, gaar ahaan dowladda Jabuuti haddii loo baahdo.
Ilaalilnta xuquuda aadanaha, iskaashi labad dhinac dhex mara , in meel looga soo wada jeesto argagixisada iyo burcad badeedka.
In kulanka xiga uu dhaco 26-27 Febraayo ee 2015 oo maalmo ka harsanyihiin kana dhaco stanbul.
Farxaan Cali Xaad “Qaraxa Aad Ii Geysateen Waajibkiisa Ayaa La Idin Marin Doonaa” (Dhageyso)